Ungayithoba njani i-iOS 8.4.1 ukuya kwi-iOS 8.4 | IPhone iindaba
Njengoko nisazi, iApple yakhupha i-iOS 8.4.1 ngoLwesine kwaye yavala ithuba lokwenza i-jailbreak engafakwanga izixhobo ezinezixhobo ezazikhona. Iindaba ezimnandi zezokuba uSaurik wakhululwa Cydia Impactor, esivumela ukuba sibuyisele ngokuthe ngqo kwi-iPhone yethu/ iPod okanye i-iPad ukusigcina kuhlobo olusemngciphekweni wokuqhekeka kwejele kwaye I-Apple kudala ivumele ixesha elifanelekileyo ngaphambi kokuyeka ukusayina ingxelo yangaphambili ukunqanda loo nto, xa sihlaziya, sishiyeke sisilele ngokunokwenzeka.
Logama nje kusayinwe i-iOS 8.4, ukwehla kunokwenziwa kwaye, ngale nto, sinako jailbreak iPhone yethu / iPod okanye iPad. Indlela ilula, kufuneka ufumane ifayile ye .ipsw ngaphambi kokubuyisela. Sikuxelela yonke into oyifunayo emva kokutsiba.
1 Ungayithoba njani i-iOS 8.4.1 ukuya kwi-iOS 8.4
2 IOS 8.4 ayisasebenzi
IOS 8.4 ayisasebenzi
Masiye kwiphepha ipsw.me for jonga ukuba i-iOS 8.4 isatyikityile.
Sikhetha ingxelo yethu kwaye siyikhuphele. Ukwazi ngokuthe ngqo ukuba yeyiphi imodeli ye-iPhone / iPod okanye i-iPad esinayo, kungcono ukubonisana nayo kunye nebhokisi.
Siqhagamshela isixhobo sethu kwikhompyuter.
Senza ukuba isebenze Fumana i-iPhone yam ukusuka kuseto / iCloud.
Sivula iTunes kwaye sikhetha isixhobo sethu ngasentla ngasekhohlo.
Con Alt ndicinezelwe (ukutshintsha kwiWindows) sicofa apha Buyisela.
Kwifestile ebonakalayo, sikhetha ifayile ye .ipsw esiyikhupheleyo kwinyathelo 2 kwaye samkela.
Ngoku kufuneka silinde de isixhobo sigqibe ukubuyisela kunye nokufaka i-iOS 8.4.
Kukho ithuba lokuba ayikuvumeli ukuba ubuyisele, kodwa oku kusonjululwa ngokunyanzela imo ye-DFU. Ngale nto siza kwenza oku kulandelayo:
Sicime iphone/ iPod okanye i-iPad.
Sidibanisa i-iPhone / iPod okanye i-iPad kwikhompyuter.
Siyacinezela iqhosha amandla imizuzwana emi-5.
Ngaphandle kokukhulula iqhosha lamandla, cinezela iqhosha lokuqala kwaye sibambe zombini imizuzwana eli-10.
Sikhulula iqhosha lamandla kwaye sibambe iqhosha lokuqala ude ubone uphawu lwe-iTunes olubonisa ukuba ikwimo yokubuyisela kwimeko yesiqhelo.
Ngoku siya kwinyathelo 1 lesifundo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Izifundo kunye neencwadana » Ungayithoba njani i-iOS 8.4.1 ukuya kwi-iOS 8.4
Kuyenzeka ukuba ugcine ifowuni yam kwimpazamo-1 xa uzama ukubuyisela iphone yam emva kokuba iye kwimo yokubuyisela kwimeko yesiqhelo xa uzama ukuvuselela ku-8.4.1.
Kwenzeka lento inye kum, andiqondi ngawe kwaye iyandothusa
Kwakukho izixhobo ze-N, kodwa kwakungekho zichazi-magama kwaye kungekho klasi yegrama.
Ukhozi fco (@ ulu_88) sitsho
Namhlanje nge-14: 05 ixesha leSpanish, u-8.4 usatyikityiwe
Phendula kuJuan Fco Carretero (@ Juan_Fran_88)
UCarlos RaGo sitsho
Xa ndingena kwiphepha, ifayile ye-ZIP iyakhutshelwa kum, kwaye xa ndiyivula, kuvele iifayile kunye neefolda, hayi ifayile ye-IPSW. Ndingayenza njani ukuba ibonakale ibuyisela?
Phendula uCarlos RaGo
UPedro Benedetti Gamez sitsho
inkulu isebenze ngokugqibeleleyo kwaye bendicinga ukuba ndilahlekile
Phendula kuPedro Benedetti Gamez
I-Apple isasayina i-iOS 8.4 Ndifuna ukwehlisa
Qhubeka utyikitye ??
Molo Manu. Bayekile ukuyityikitya kwiintsuku ezininzi ezidlulileyo (okanye kwiveki ethile, andikhumbuli).
Isamsung yazisa ngeGear S2 entsha, iswatchwatch yayo yamva nje